Muuri News Network » Daawo Sawirada Ciidamada Badda Puntiland oo Dabaal degay soona bandhigay dhoolo tusyo cajiib.
Daawo Sawirada Ciidamada Badda Puntiland oo Dabaal degay soona bandhigay dhoolo tusyo cajiib.
Ciidamada Badda Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntiland ayaa u dabaal dagay sanadguuradii shanaad ee kasoo wareegtay markii la aas aasay, waxaana munaasabad xuska kasoo qeyb galay Madax katirsan Maamulka Puntiland iyo Wakiilo kala duwan.
Munaasabadan ayaa ka dhacday xarunta ciidanka Badda ay ku leeyihiin deegaanka Bendersiyaada ee magaalada Boosaaso, waxa ayna ciidamada halkaasi kusoo bandhigeen cudooda ciidan iyagoona halkaasi sidoo kale ku sameeyay dhoolo tus.
Admiral Cabdirisaaq Diiriye Cismaan oo ah taliyaha ciidanka badda Puntland, oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in Ciidamada Badda ee Puntiland ay maanta yihiin awood jirta, waxa uuna tilmaamay in ujeedooyinkii loo dhisay ay aheed in ay ka hortagaan burcad badeeda sidoo kale soo celiyaan sharciga xeebaha Soomaaliya.
Ciidamada Badda ee Maamulka Puntiland ayaa hada ciidan dhisan oo ka howlagala xeebaha Maamulkaasi, waxa ayna Cidankan heestaan doomo dheereeya iyo hub , waxa ayna dagaal kula jiraan kooxaha burcad badeeda iyo doonyaha sida Sharci darada ah xeebaha uga kaluumeesta.